Bitcoin ကြွယ်ဝမှု Scam များကိုသတိပြုပါ | investingstockonline.com
ထရေးဒင်း cryptocurrencies ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကိုဘယ်မှာနှင့်အညီ, သင်အမြဲလိမ်လည်မှုအနုပညာရှင်တွေခြောငျးနဲ့သတိမရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလူးလာပွေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရှာတွေ့ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျသညျ။
နောက်ဆုံးပေါ် cryptocurrencies ကုန်သွယ်လိမ်လည်မှုဥစ္စာဓန Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်နေ့လျှင်အမြတ်အစွန်း၌သငျထောင်ပေါင်းများစွာစေမည်သည့် automated binary options များကုန်သွယ်ဆော့ဖျဝဲအဖြစ်စျေးကွက်ခံရပါတယ်။
ယင်း၏ပစ်လွှတ်စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကတည်းကကအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးလက်ခံရရှိကြောင်းမျှသံသယရှိပါတယ်။ သို့သော်တိုင်းသတိထားကုန်သည်တဦးတည်းမေးမြန်းထားပါသည်။ Bitcoin စည်းစိမ်ကိုတစ်ဦးလိမ်လည်မှုလား? ဒါက Bitcoin စည်းစိမ်ကိုလိမ်လည်မှုပြန်လည်သုံးသပ်သင်လုံးဝရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ဒီစနစ်တဦးတည်းလုပ်သမျှသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
၎င်း၏ "အခမဲ့" အလွန်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာကုန်သည်များငွေရှာဖို့အခမဲ့အခွင့်အလမ်းလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်။ Bitcoin ဥစ္စာဓနစနစ် join ဖို့အခမဲ့အဖြစ်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့စျေးနှုန်းမှာပါရှိပါတယ်။ သင်ဒီစနစ်အတူပါလာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်တာဝန်ပေးနေပွဲစားအနည်းဆုံး $ 250 ငွေသွင်းရန်မျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသာစည်းကမ်းတပွဲစားသို့လင့်ထားသည်လိမ့်မယ်ဥစ္စာဓန Bitcoin လာမည့်အနီရောင်အလံမှအကြှနျုပျကိုဦးဆောင်နေသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံမှဖြေဆိုရန်အဘယ်သူမျှမပျောက်ကွယ်ခြင်းနှင့်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခြင်းဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီလိမ်လည်မှုနောက်ဆုံးတော့ထိတွေ့နဲ့အောက်မှာဝင်သောအခါ, သူတို့ရဲ့ငွေရင်းနှီးမြှပ်နှံသူမည်သူမဆိုရှုံးပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ဦးအားပွဲစားကဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြစ်ကြသည် ArgusFX နှင့်သန့်စင်သော Market ကချိတ်ဆက်နေသည်။ တစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားအကောင့်ဆော့ဖ်ဝဲလင့်ထားသည်ဖို့ကြိုးစားနေရိုးရှင်းစွာကျရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဤ software ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမမြင်နိုင်
ရီးရဲလ်ထရေးဒင်းစက်ရုပ်လိုပဲများအတွက် Go Option Robot! Join စေရန်အဆိုပါ Banner ကလစ်နှိပ်ပါ!
အဆိုပါအထူးနှုန်းများသောဗီဒီယိုကိုသင် autopilot အပေါ်တစ်နေ့လျှင် 0.3 Bitcoin ၏နိမ့်ဆုံးဝင်ငွေနိုငျသောရဲရင့်ပြောဆိုချက်ကိုစေသည်။ လက်ရှိ Bitcoin တန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်သောတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအား $ 1000 ပါပဲ။
ဤအရေးဆိုမှုကိုဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ယင်း၏ဖန်တီးသူ၏အဆိုအရ, တကကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဆုံးရှုံးဖို့ကမဖြစ်နိုင်သလောက်လုပ်ရသောအတုထောက်လှမ်းရေး algorithms အသုံးပြုသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုရွေးချယ်စရာကုန်သွယ် bot ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်မည်သို့, ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဆုံးရှုံးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိအမြဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကိုစည်းကမ်းတပွဲစားနှင့်အတူရာပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာထွက် dishing ပြီးနောက်, သငျသညျ autopilot အပေါ်တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဝင်ငွေကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကမကိုဘယ်လိုသိရှိခြင်းမရှိ။
ငါပိုက်ဆံဤနည်းအောင်စိတ်ထဲမဟုတ်ဘူးနေစဉ်, ငါ Bitcoin ဥစ္စာဓန app ကိုလုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး။ အလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်နှင့်ထဲသို့ဝင်မဆိုအရောင်းအ ITM သို့မဟုတ် OTM အဆုံးသတ်ပါပြီရှိမရှိသိရှိခြင်း၏လမ်းမရှိသောင်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Bitcoin စည်းစိမ်ကိုလိမ်လည်မှု purportedly မက် Carney အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အချို့သောသုတေသနပို့ချပြီးနောက်, ငါ Crypto စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုခေါ်အလားတူ cryptocurrency လိမ်လည်မှုစနစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ခြင်းတူသူတစ်ဦးကိုတွေ့။ , အလားတူအမည်များရှိခြင်းနှစ်ဦးစလုံးစနစ်များကို '' ဖန်တီးသူအပြင်, သူတို့ကပုံစံဒီဇိုင်းအတွက်အတော်လေးဆင်တူပါတယ်။
အဆိုပါစနစ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗီဒီယိုကိုသက်သေခံချက်အသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ သူတို့ထဲကအဘယ်သူမျှမယုံကြည်အသံ။ တကယ်တော့ဒီဒီလိမ်လည်မှုအကြောင်း rosy ရုပ်ပုံပန်းချီဖို့ရည်ရွယ် script များချွတ်ဖတ်နေသရုပ်ဆောင်များကိုပေးဆောင်နေကြသည်ဟုသံသယရှိနေကြသည်။
ဒါကအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအထူးနှုန်းများဗီဒီယိုထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျ app ကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုရှင်းပြသည်။ သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကလစ်အမှန်တကယ်အရောင်းအအားမရသို့မဟုတ်မည်သည့်အသုံးပြုသူအချို့ငွေရှာရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Bitcoin စည်းစိမ်ကိုတစ်ဦးလိမ်လည်မှုကြောင်းသံသယရှိစရာမလိုပါပါပဲ။ ဒါဟာစနစ် join ဖို့အခမဲ့အဖြစ်ထုပ်ပိုးခံခြင်းဖြင့်သတိမရှိသောကုန်သည်များအတွက်ဆွဲဆောင်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ သင်သည်သူတို့၏စည်းကမ်းတပွဲစားတစ်ဦးနှင့်သင်၏ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံင့်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်အဘယ်သူ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်သငျသညျအသီးအသီးနေ့၌သင်တို့အားဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အောင်နားမလညျနိုငျ bot ယုံကြည်စိတ်ချဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ခံရဖို့ငွေအများကြီးရှိရဲ့သံသယရှိစရာမလိုပါင် cryptocurrencies။ သို့သော်ထိုသို့ Bitcoin စည်းစိမ်ကိုလိမ်လည်မှုနှင့်သင်၏အချိန်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကထိုက်တန်ပါဘူး။
Tags: Bitcoin ငွေသားတစ်ဦးလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါသည်, ငွေသားလိမ်လည်မှု Bitcoin, လိမ်လည်မှု Bitcoin, Bitcoin ကြွယ်ဝမှုမေးလ်အတု, တစ်ဦးလိမ်လည်မှု Bitcoin သို့မဟုတ် legit ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးလိမ်လည်မှု Bitcoin သလဲ?, ဥစ္စာဓနကလပ်တစ်ခုလိမ်လည်မှု Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါ Bitcoin လိမ်လည်မှု, အဘယ်ကြောင့် Bitcoin တစ်လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါသည်
သုံး×4=
Created: အောက်တိုဘာလ 13, 2017